“တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ မူဝါဒပိုင်ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ့်သူတွေကို တိုက်တွန်းချင်တာက နိုင်ငံသားတိုင်း နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးအတွက် သူတို့ရဲ့ ယုံကြည် ထောက်ခံတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို မဲထည့်ခွင့် ပေးသင့်တယ်” နိုင်အဲမွန် (Hurfom စီမံကိန်းဒါရိုက်တာ) » Myanmar Peace Monitor
“တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ မူဝါဒပိုင်ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ့်သူတွေကို တိုက်တွန်းချင်တာက နိုင်ငံသားတိုင်း နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးအတွက် သူတို့ရဲ့ ယုံကြည် ထောက်ခံတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို မဲထည့်ခွင့် ပေးသင့်တယ်” နိုင်အဲမွန် (Hurfom စီမံကိန်းဒါရိုက်တာ)
မွန်ပြည်လူ့အခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်း Hurfom စီမံကိန်းဒါရိုက်တာ နိုင်အဲမွန်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်မရော၊ မုဒုံ၊ သံဖြူဇရပ်၊ ရေးမြို့နယ်၊ တနင်္သရီတိုင်းဒေသကြီး ရေဖြူမြို့နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တို့တွင် အခြေစိုက်လှုပ်ရှားလျက်ရှိသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် EAOs ထိန်းချုပ်ရာ ၆ မြို့နယ်မှ ကျေးရွာအုပ်စု ၃၀ ခန့် ကျေးလက်နေ ပြည်သူတို့၏ အင်တာဗျူးပေါင်း ၁၂၉ ခုကိုအခြေခံ၍ ၂၀၂၀ ပြည်လုံးကျွတ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးပိုင်ခွင့်အခက်အခဲနှင့် စိန်ခေါ်မှုများအပေါ် မီးမောင်းထိုးဖော်ပြထားသည့် “ဖယ်ကြဉ်မရှိမှ လွတ်မျှတ” အမည်ရှိ အစီရင်ခံစာ ရေးသားပြုစုသူ မွန်ပြည်လူ့အခွင့်အရေးဖောင်ဒေး ရှင်း Hurfom စီမံကိန်းဒါရိုက်တာ နိုင်အဲမွန်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည်။
မေး – “ဖယ်ကြဉ်မရှိမှ လွတ်မျှတ” အစီရင်ခံစာပြုစုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကို ပြောပြပါလား။
ဖြေ – အဓိကကတော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးတွေကို လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင် ဒီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်မှာ ပြည်သူလူထုတွေ ဘယ်လောက်အထိပါဝင်နိုင်သလဲ၊ ဘယ်လောက်အထိ လွတ်လပ်မျှတစွာနှင့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်နိုင်ခွင့်ရှိသလဲဆိုတဲ့အတိုင်းအတာကို ကျနော်တို့ သုံးသပ်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီသုံးသပ်ချက်တွေကို ကျနော်တို့က အသံတွေ ပြည်သူလူထုရဲ့ ခံစားနေရတဲ့ အခက်အခဲတွေ စိန်ခေါ်မှုတွေကို အခြေခံပြီးတော့ ကျနော်ဒီအစီရင်ခံစာကိုပြုစုထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မေး – မဲထည့်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ပထမကတော့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေ မှတ်ပုံတင်ကိစ္စ/ နိုင်ငံသား စီစစ်ရေး ကတ်ပြားကိစ္စတွေက လူဦးရေဘယ်လောက်မှာ မရှိဖြစ်နေတာလဲ အကျဉ်းချုံးပြီးတော့ ပြောပြပေးပါလားခင်ဗျ?
ဖြေ – တရားဝင် မဲထည့် နိုင်ခြေရှိတဲ့ အခြေနေမျိုးတွေနဲ့ လက်လှမ်းမမှီတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ အများကြီရှိပါတယ်၊ ဥပမာ- ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့အစည််းတွေ ထိန်းချုပ်နေရာဒေသ အတော်များများမှာ ပထမဆုံး မှတ်ပုံတင် ကိစ္စတွေ နောက်ပြီး အိမ်ထောင်စုစာရင်းဝင်မရှိသေးတဲ့ကိစ္စတွေ အများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ကြည့်မယ်ဆိုရင် အဲဒီဒေသမှာ ၃၈% ကနေ ၄၅ % အထိရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ် ရေးချောင်ဖျားဒေသတွေမှာ ပြီခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလမှာဆိုရင် Community ၁၉ ခုက မပါဝင်နိုင်တာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ အခု ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အတော်များများက ပြန်ပြီးတော့ပါလာတဲ့အနေအထား ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်နှင့်စာလို့ရှိရင် ပိုပြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတဲ့ အရေအတွက်လို့ ကျနော်တို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က မဲထည့်နိုင်သည်ထားဦးတော့ ရွေးကောက်ပွဲကာလ နိုဝင်ဘာ (၈) ရက်နေ့မှာဆိုရင် မဲရုံနဲ့ အလှမ်းဝေးနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်၊ အဒီအတွက်ကိုလည်း ကျနော်တို့က သူတို့ရဲအသံတွေကို ကျနော်တို့ စုစည်းပြီးတော့ ဘယ်လိုမျိုးမဲရုံတွေ တိုးချဲ့ပြီတော့ UEC ကနေဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကို ကျနော်တို့ တိုက်တွန်းနှိုဆော်မှုတွေ လုပ်ဖို့အစီစဉ်ရှိပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ တစ်လကြိုတင် ဒီအစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာ အစုအဖွဲ့တွေကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတွေကို အဓိကကျနော်တို့ Advocacy လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။
မေး – အဓိကဘယ်ဧရိယာကို အဓိကလေ့လာပြီးတော့ ဒီအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ရပါသလဲ၊ လူဦးရေအရသော်လည်းကောင်း ကျေးရွာအရသော်လည်းကောင်း စုပေါင်းဧရိယာ ဘယ်လောက်လောက် လွှမ်းခြုံထားပါသလဲ။
ဖြေ – အဓိကကတော့ ကျနော်တို့ စီမံကိန်းဧရိယာ (၆) မြို့နယ် ကျနော်တို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျနော်တို့ ဒီကြာအင်ဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊ ရေးမြိုးနယ်၊မုဒုံမြို့နယ်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် နှင့် တနင်သာရီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ရေးဖြူမြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသံတွေ သူတို့ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်တွေ နောက်ပြီး မဲထည့်တဲ့အခါ ဖြစ်လာနိုင်မည့်အတားအဆီးတွေ အခက်အခဲတွေ ဥပမာ- မဲရုံနဲ့ အကွာအဝေး အနေအထားတွေ၊ နောက်တစ်ခုက မဲဆန္ဒမှာ ပါဝင်ခွင့်မရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးေတွကို အဓိကထားပြီးတော့ ဒီအစီရင်ခံစာမှာ သေသေချာချာ ကျနော်တို့ကောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ။
ကျေးရွာစုပေါင်း (၃၀) ကျော် ကျနော်တို့မျှော်မှန်ထားပါတယ်၊ အဓိကက ကျနော်တို့ ဒီအစုအဖွဲ့ (၂) ခုရယ်၊ အစုအဖွဲ့အလိုက် တွေ့ဆုံမေးမြန်မှုတွေ နှစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ထားပါတယ်၊ နောက်တစ်ခါ ကျနော်တို့ အင်တာဗျူပေါင်း (၁၂၉) ခုကို ကျနော်တို့ Advocacy လုပ်ပြီးတော့ ဒီကျေးရွာ(၃၀) ကျော် မြို့နယ်ပေါင်း (၆) မြို့နယ်မှာ ကျနော်တို့ကွင်းဆင်းလေ့လာတာက (၂) လ ကြာမြင့်ပါတယ်။
မေး – သူတို့ရွာတွေက အများအားဖြင့် မဲရုံနဲ့ သူတို့ရဲဧရိယာတွေ ဘယ်လောက်လောက် အဝေးဆုံးနေရာတွေက ဘယ်နှစ်မိုင်လောက်ရှိတယ် သွားရတဲ့ခရီးအခြေအနေတွေကို နည်းနည်းပြောပြပေးပါလား?
ဖြေ – အနည်းဆုံး ဥပမာပြရမယ်ဆိုရင် မွန်ထိန်းချုပ်ဧရိယာကနေ ရေးမြို့နယ် ကျောင်းရွာအုပ်စုဝင်မှာဆိုရင် ကျောင်းရွာဆီကို မဲသွားထည့်ရမယ်ဆိုရင် အနီးဆုံးက ၃ မိုင်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်၊ အဝေးဆုံးက ၈ မိုင်အထိ ရှိတယ်ဆိုတော့ ၂၀၁၅ မှာ မဲထည့်နိုင်မယ့်အခြေအနေရှိလင့်ကစား ကျနော်တို့မဲထည့်နိုင်မယ့် အနေအထား ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့က ဒီတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်မှာ တစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ မဲရုံတွေကို ထပ်တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးဖို့ စဉ်စားပေးဖို့ဆိုတဲ့ အခြေအနေကို ကျနော်တို့က Advocacy လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
မေး-ဟုတ်ကဲ့ မွန်ပြည်သစ်ဧရိယာထဲမှာ လုံးဝမဲရုံထားခွင့်မပြုဘူးလို့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကြေညာချက်တွေထုတ်တာ ရှိပါတယ်၊ အဲဒီမှာ လူဦးရေဘယ်လောက်အထိ အကျုံးဝင်သွားသလဲ မဲပေးခွင့်မရတဲ့လူဦးရေ။
ဖြေ-ကျနော်တို့ခန့်မှန်းချက်ကေတာ့ ရွာသားတွေ အနည်းဆုံး ၂၀၀၀ နဲ့ ၂၅၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရှိထားပါတယ်။ ဒါကအနိမ့်ဆုံး သတ်မှတ်ပြီးတော့ ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေပါ၊ ဒီထက်မက ထပ်ပြီးကျနော်တို့ သုတေသန လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီထက်မက ကျနော်တို့ထပ်တွေ့နိုင်မယ့် အခြေအနေရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းပါတယ်။
မေး – အခုမွန်ပြည်သစ် ဧရိယာ ဒီပနန်းပုံဧရိယာလောက်မှာဆိုရင် အချို့က လူဦးရေ ၂၀၀၀ လောက် မဲပေးခွင့် ပြန်ရတယ်လို့ သတင်းမှာ ကျနော်တို့တွေ့ရပါတယ်၊ အဲဒီမှာဆိုရင် လက်ရှိမဲရုံတစ်ရုံရဲ့ လက်ခံနိုင်တဲ့ လူဦးရေ အရေအတွက်နဲ့ ဒီကတိုးလာတဲ့ဟာတွေက လုံလောက်မှုရှိလား နောက်ဘယ်လိုအခက်ခဲမျိုးကြုံနိုင္ပါသလဲ။
ဖြေ – ဒီစိုးရိမ် မှုကလည်း ကျနော်တို့ ကောက်ခံရရှိတဲ့အသံထဲမှာပါပါတယ်၊ဥပမာ အထူးသဖြင့် Covid အကန့်အသတ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင် အဲဒီနေ့မှာ မဲရုံတစ်ရုံမှာ တစ်နေ့တာ လူအယောက် ၈၀၀ နဲ့ ၁၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကို မဲပေးခွင့်စီစဉ်ထားတယ်ဆိုပါစို့ ကျန်တဲ့လူတွေရဲ့ အခြေအနေက ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကလည်း သူတို့အသံထဲမှာပါပါတယ်။ ဒါကိုလည်း ကျနော်တို့က ဒီထက်စဉ်စားချက်ကို ကျနော်တို့က သက်ဆိုင်ရာ UEC တို့ သက်ဆိုင်ရာ ပါတီကိုယ်စားလှယ်တို့ကိုလည်း ကျနော်တို့ အသိပေးပြီးတော့ အဲဒီအခက်အခဲတွေ မဖြစ်နိုင်အောင် ကျနော်တို့ ကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးတော့ အစီအမံဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အနေအထားမျိုးတွေ ဖြစ်လာအောင် ကျနော်တို့တိုက်တွန်းဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။
မေး – ကျနော်တို့သတင်းကြာတာက အခုလူဦးရေ ၅၀၀ လောက်က မှတ်ပုံတင် မရှိဖြစ်နေတယ်၊ အဲတာက လဝက ဌာနက ထောက်ခံစာထုတ်ပေးပြီးတော့ မဲပေးခွင့်ပေးဖို့အစီအစဉ် လုပ်ပေးဖို့ သတင်းမှာ တွေ့ရတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဒါက တကယ်ဖြစ်လာမလား မဲပေးတဲ့အချိန်မှာကျတော့ မှတ်ပုံတင် မရှိပဲနဲ့ ထောက်ခံစာ လောက်နဲ့က မဲပေးလို့အဆင်ပြေပါ့မလား ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုး ကြာသိရသလဲ။
ဖြေ – ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ နိုင်ငံတိုင်း နိုင်ငံတိုင်းမှာ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအထောက်အထား တစ်ခုခုပြသနိုင်မှုရှိမှသာလျင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်မယ့်အနေအထားရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်၊ ဥပမာ- ကျနော်တို့နဲ့နီးတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဒီအတိုင်ပဲ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို မူတည်ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ဒီအခွင့်အရေး ရှိ မရှိဆုံးဖြတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဒီဟာက ထူးခြာတဲ့အခြေအနေလို့ ပြောလို့ရသလို အကယ်၍ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနတို့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပြီးတော့ မူဝါဒတစ်ရပ်ချထားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအခြေအနေက ဖြစ်လာနိုင်မယ့်အခြေအနေရှိပါတယ်။ သို့သော် ဒီတွေ့ရှိချက်နဲ့ မြေပြင်ပေါ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေ၊ နောက်တစ်ခါ အောက်ခြေဒီလုပ်ငန်းဖေါ်ဆောင်နေတဲ့ အင်အားစုနဲ့ မူဝါဒချမှတ်တဲ့ဒီအလွှာက ကွာဟမှုတွေ အခုထက်ထိရှိတာကို ကျနော်တို့တွေ့နေရတဲ့အတွက် ဒီကိစ္စဖြစ်လာနိုင်မယ် မဖြစ်လာနိုင်ဘူးဆိုတာ လာမယ့်နိုင်ဝင်ဘာ (၈) ရက်နေ့ရောက်မှ သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး – KNU တို့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီတို့ နယ်မြေက မဲဆန္ဒရှင်လူထုတွေ မဲပေးနိုင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကို ဘာတိုက်တွန်းချင်သလဲ။
ဖြေ – တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ မူဝါဒပိုင်ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ့်သူတွေကို တိုက်တွန်းချင်တာက နိုင်ငံသားတိုင်း နိုင်ငံသားတိုင်းတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးအတွက် သူတို့ရဲ့ ယုံကြည် ထောက်ခံနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို မဲထည့်ခွင့် ပေးသင့်တယ်လို့ ကျနော်တို့မြင်တယ်၊ ဒါမှလည်း ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းကျတဲ့ အုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုအောက်မှာ ရှိနေတဲ့အနေအထား အဖြစ် ဖေါ်ပြပြီးတော့ ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ကျနော်တို့ပြသနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ချက်က ကျနော်တို့ အဲဒီလိုမျိုး ဖေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့တောင်းကြည့်တာက UEC နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသန္တရ (သို့မဟုတ်) သက်ဆိုင်တဲ့ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရကြားမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့မူဝါဒ တိတိကျကျ ရှိအောင် ဝိုင်းဝန်ပြီးတော့ နှစ်ဖက်ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်သူတွေရဲ့ နိုင်ငံသား နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးတွေကို ကျနော်တို့ ဖေါ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
မေး – အခုကျနော်တို့တွေ့ရတာက မွန်ပြည်သစ်ပါတီက သူ့ဧရိယာမှာရှိတဲ့ မဲပေးနိုင်တဲ့သူတွေရဲ့စာရင်ကို ပြုစုထားတယ်၊ အဲဒီစာရင်းကို ပြည်နယ်အစိုးရဆီသို့ ပို့ထားတယ်၊ နောက်ပြီတော့ပြည်နယ်အစိုးရကနေ NRPC ကတဆင့် တောင်းထားတာလည်းရှိတယ်၊ အဲဒီအပေါ်မှာ အချိန်အကြာကြီး တိုင်ပတ်နေကြတယ်၊ NRPC ဘာမှအကြောင်ပြန်မပြန် မွန်ပြည်သစ်က ဘာမှမပြောပါဘူး၊ ဒီလူတွေ မှတ်ပုံတင် အမြန်ရအောင် မဲပေးနိုင်အောင် ဘယ်လိုတိုက်တွန်းချင်သလဲ။
ဖြေ – အထိက ခုနက ကျနော်ပြောတဲ့မူဝါဒတစ်ရပ် ဖော်ဆောင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်၊ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားတွေ အကြားမှာ အဖွဲ့အစည်းတွေအကြားမှာဆိုရင် ဒီပြည်သူတွေရဲ့ မဲထည့်နိုင်မယ့် အခြေအနေမျိုးကို ဖန်းတီးနိုင်မယ့် စုစည်းမှု ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်မှုတွေ အားနည်းနေတာကို တွေ့ရပါတယ်၊ ဒါကြောင့်လည်းပဲ ဌာနတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာမှာ ဆက်သွယ်မှုအချိတ်အဆက်တွေ လွဲမှားနေတာ၊ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အလေ့အထတွေ ရောင့်ရဲနေတာတွေ့ရတယ်၊ ဒါကလည်း ၂၀၂၀ မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး၊ပြီးခဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာလည်း ကြာအင်ဆိပ်ကြီးမြို့နယ် KNU ထိန်းချုပ်ဧရိယာလက်အောက်မှာ ရှိတဲ့ ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း (၃၈) ရွာ မဲပေးခွင့်မရခဲ့တဲ့ အခြေအနေရှိပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကလည်း ပြည်နယ် UEC နဲ့ သက်ဆိုင်ရာဒေသန္တရ အာဏာပိုင်တွေအကြာ အကျေအလည်ဆွေးနွေးမှုတွေ ပျက်ကွက်ခဲ့ တဲ့အတွက် အဲဒီလို ဆက်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေ မဲထည့်ခွင့်မရတဲ့အနေအထား ထပ်ပြီးကြုံရပါတယ်။ အခုလည်း အဲဒီမှာရှိတဲ့ တစ်ချို့ကျေးရွာအုပ်စုတွေ၊ နောက်ပြီး မွန်ထိန်းချုပ်ဧရိယာမှာရှိတဲ့ တစ်ချို့ကျေးရွာ အုပ်စုတွေမှာ ဒီအတိုင်ဆက်ဖြစ်နေတာတွေ့ရလို့ ဒီအစီရင်ခံစာမှာဒါတွေကို အစောတလျင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ကျနော်တို့ စုပေါင်းပြီးတော့ ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအားြဖင့် သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကို ရရှိအောင် ပြန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ ကျနော်တို့ တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
မေး – နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ လက်နက်ကိုင်းတိုင်းရင်းသားဖြစ်ေစ အစိုးရဖြစ်စေ ဒေသခံပြည်သူဖြစ်စေ CSO အနေတို့ကိုဖြစ်စေ ကိုအဲမွန်တို့ရဲ့ နောက်ဆုံးတိုက်တွန်းအကြံပေးချက်ကုိ ေပးပါအုံးခင္ဗ်?
ဖြေ – အဓိက ဒီ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ‘လွတ်လပ်မျှတဆောင်ရွက်ကြ’ ဆိုတဲ့ UEC ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ရှိပါတယ်၊ ဆောင်ပုဒ်ကတော့ကောင်းပါတယ်၊သို့သော် မြေပြင်မှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါ ခုနကပြောတဲ့ အတားအဆီး အခက်အခဲတွေအပြင် ဘယ်လိုမျိုးမဲထည့်ရမယ့် Voter Education မဲထည့်ခြင်းဆိုင်ရာ ပညာပေးမှု လုပ်ငန်းတွေ၊ မဲပေးမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေ၊ မဲပေးမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ က လက်လှမ်းမမှီတာ အများကြီးရှိတယ်၊ ဥပမာ- အင်တာနက်မရှိတာ၊ အင်တာနက်မရောက်တဲ့နေရာ၊ တယ်လီဖုန်းမရတဲ့နေရာတို့ ဆိုလို့ရှိရင် အဲဒီမှာ ရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေက လုံးဝ မဲထည့်နိုင်မယ့် အချက်လက်တွေ၊ ဘယ်လိုမျိုး မဲထည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေ၊ နောက်ပြီး ပိုဆိုးတာကတော့ သူတို့ထည့်ရမယ့် ကိုယ်စားလှယ္လောင်းတွေကို သူတို့မသိတာရှိနေတယ်၊ဒါတွေက ကျနော်တို့လက်လှမ်းမှီဖို့အတွက် ဘယ်လိုမျိုး ဝိုင်ဝန်ပြီးတော့ CSO တွေ CBO တွေ NGO တွေ နှင့် သက်ဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့တွေ၊ဒီကိစ္စကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီတော့ ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ ပညာပေးရန်အတွက် အထူးအရေးကြီးပါတယ်၊ အဲဒီအပေါ်မှာလည်း ကျနော်တို့ အထူးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်၊ နောက်တစ်ချက်က ပထမဆုံးအကြိမ် မဲထည့်မယ့် လူငယ်အင်အားစုတွေလည်း ဒီ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တော်တော်များများ ရှိနေတာကို သုတေသနအရ တွေ့ရပါတယ်၊ ဘယ်လိုမျိုးမဲထည့်ရမလဲ၊ မဲထည့်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေ ဘာတွေလည်းဆိုတာ သူတို့တွေသိဖို့ တော်တော်ကြီးကို ရုန်းကန်ရမယ့် အနေအထားရှိပါတယ်၊ဒါတွေကို ဝိုင်းဝန်းစုပေါင်းပြီးတော့ ကျနော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအားဖြင့် ၂၀၂၀ မှာ လွတ်လပ်မျှတ ဆောင်ရွက်ကြ ဆောင်ပုဒ်နဲ့အနီးစပ်ဆုံး ပုံဖေါ်နိုင်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဗညားအောင် (MNA) – မေးမြန်းသည်။
မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်သွားပြီးလား November 25, 2020